Soul The Of FEELLiFE: Bixi Jidka 3rd Of Qadarka Qaadashada Waayo aadanaha
1. Surge® Conversion Frequency Nebulization Technology
Buufin qabsado neefsashada inta jeer caqligiisu. heerka buufiyo iyo lacagta laga beddeli karaa sida ay inta jeer neefta oo qofka bukaanka ah, in la kordhiyo heerka dhigaalka ee dareeraha ah ee sambabada ah oo qoto dheer. Mid ka mid ah nebulization diinta ka soo noqnoqoshada shariig inay jir hab nebulization saddex jeer.
2. Technology Is-Nadiifinta
Iyada oo qalab ah oo biyo karaa gabal nebulizer si toos ah markii xoog-on. nebulizer The geli doonaa hab lagu nadiifiyo si toos ah markii u jeestay on, iyo Victor Moses isagoo awood u leh inuu soo tuurid daroogada haraaga ah oo ciidan saameyn weyn bilowga 5 seconds, si loo yareeyo arrin ku xannibaad daroogada.
3. Heerkulka Control Induction Oo qallalan Gubidda Technology-hortagga
Heerkulka induction control: ah nebulizer induction NTC. Nebulizer ayaa thermistor a NTC oo lagu ogaan karaa heerkulka xalka koobka daawada, waxa ay hoos u doonaa heerkulka si toos ah marka heerkulku gaadho 45 ℃, inta badan si ay u ilaaliyaan hawlaha ee dareeraha ah.
technology-hortagga gubashadii qalalan: isticmaalaya gooladaha kulaylku in ay dareemaan haddii xal ee lagu kaydiyana waxaa dareere daalan. nebulizer xidh-doona marka ay dareemeysaa xalka in lagu kaydiyana waxaa dareere ah waxaa maamula soo baxay, in gabal nebulizer ka lagu halligay gubashadii qalalan ilaaliyo.
Iyada oo iska caabin sare heerkulka, function qarax-caddeynta iyo waxqabadka nabadgelyada sare, lacag iyo dheecaan ka gaari karin 3000 wareegyada, nolosha adeegga waa ilaa 5 sano.
5. Mesh® Nebulizer Piece Waxyaabaha Oo Laser Superfine feeray Technology
Titanium daawaha gabal nebulizer iska caabin karaa daxalka, la biocompatibility wanaagsan, ka dhigaysa nebulization ammaan.
Daloolin laser dhawraa dhexroor pore at 2.5um ah ± 25%, ka dhigaysa qayb ka buufiyo dheeraad ah jilicsan, si loo kordhiyo heerka dhigaalka ee dareeraha ah ee sambabada ah oo qoto dheer, ka dhigaysa nuugista daroogada iyo waxtarka si fiican.